منزل>الغسيل သုံး ပစ္စည်း ရောင်း
တမန်တော် ၂ | အွန်လိုင်း သမ္မာကျမ်းစာ | …- الغسيل သုံး ပစ္စည်း ရောင်း ,တမန်တော် ၂:၁-၄၇—သမ္မာကျမ်းစာကို အွန်လိုင်းကနေ ဖတ်ပါ ဒါမှမဟုတ် အခမဲ့ ကူးယူပါ။ ယေဟောဝါသက်သေများ ထုတ်ဝေတဲ့ ကမ္ဘာသစ်ဘာသာပြန် သမ္မာကျမ်းစာ။ပည်တွင်းစက ... - The Myanmar Timesရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းအရောက် စက်သုံးဆီဈေး နှုန်းများကို အပတ်စဉ် အင်္ဂါနေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများမှ တစ်ဆင့် …
အကောက်ခွန်နှင့် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ …
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှုတွင် အကောက်ခွန်အတားအဆီးများကို လျော့ချရေးအတွက် ဂတ်အဖွဲ့၏ ကမကထပြုမှုဖြင့် ဆွေးနွေးစေ့စပ်မှုမ ...
အပိုင်း (၂) - ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ …
( ဈ ) DAT (Delivered At Terminal )။ ရောင်းသူသည် ကုန်ပစ္စည်း များကို သယ်ယူပို့ဆောင်သည့်ယာဉ်ပေါ်သို့ သယ်ချပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင် နက်ဝယ်သူ၏ အမည ...
ရှဖိရေ က ‘ဟုတ် ပါတယ်။ ဒီလောက် ပါပဲ’ လို့ ဖြေလိုက်တယ်။ ဒါ လိမ်ပြော နေတာ။ လယ် ရောင်း လို့ ရတဲ့ ငွေ တချို့ တစ်ဝက် ကို ဖယ် ထားပ ...
Groupe public W ကား သိန်း 20 အောက် …
W ကား သိန်း 20 အောက် အရောင်းဝယ်a36 208 membres. ရောင်းပါဝယ်ပါ. Groupe d’achat et de vente
ဥရောပ သမဂ္ဂ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဥရောပ သမဂ္ဂသည် အဖွဲ့ဝင် ၂၈ နိုင်ငံရှိသည့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးရာ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှာ အဓိကအားဖြင့ ...
ဈေး - ဝီကီပီးဒီးယား
ဈေးသည် မြို့၏အင်္ဂါရပ်များတွင် အပါအဝင်ဖြစ်ပေသည်။ မြို့တိုင်းတွင်ဈေးရှိသည်။ မြို့အကျယ်အဝန်းကိုလိုက်၍ ဈေး တစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခု သုံးခု ရ ...
ကဏန်း၊ ငါးရှဉ့် ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရာမှာ …
“အမှန်တရားလမ်းမှာ လျှောက်ပါ့မယ်” — …
၂ ဝယ် ပြီးသား ပစ္စည်း ကို ပြန် လဲ ကြပေမဲ့ “ဝယ်” ပြီးသား “တိကျ မှန်ကန်” တဲ့ ကျမ်းစာ အသိပညာကို တော့ ပြန် လဲ ချင် မှာ၊ “ရောင်း” ချင ...
အမှုဆောင်လုပ်ငန်းမှာ တိုးတက်အောင် …
ကျွန်တော်တို့ ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ မျက်မမြင်တွေကို ဂရုစိုက်ရာမှာ ယေဟောဝါကို ဘယ်လို အတုယူနိုင်သလဲ။
Listings in ရုပ်သံလွှင့်ဌာနများ …
Listings in ရုပ်သံလွှင့်ဌာနများ (အရောင်းပြခန်း), ဆေးပစ္စည်းကိရိယာမ ...
Snowflake - ဒီ တစ် ခါ တော့ အိတ် လေး ရောင်း …
ဒီ တစ် ခါ တော့ အိတ် လေး ရောင်း ပေး ချင် ပါ တယိ ရှင့် ဒီ အိတ် လေး က မင့် မင့် သူ ငယ် ချင်း ပစ္စည်း ဖြတ် တဲ့ အ နေ တဲ့ မင်မင့် ကို ကူ ရောင်း ပေး ပါ ဆို...
Listings in ကားကက်ဆက်ပြုပြင် ရောင်းဝယ်ရေး, …
Listings in ကားကက်ဆက်ပြုပြင် ရောင်းဝယ်ရေး, အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ and ဆေးဝါးပစ္စည်းများ
ဖိုးလျပည္.ေျပာတဲ့ သူႏွင့္ သူ၏အေမ | Lwin Pyin …
ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၅ ေအာက္တိုဘာညက ကြၽန္ေတာ့္အေၾကာင္းေလးျဖစ္ပါတယ္ ...
တမန်တော် ၄ | အွန်လိုင်း သမ္မာကျမ်းစာ | …
တမန်တော် ၄:၁-၃၇—သမ္မာကျမ်းစာကို အွန်လိုင်းကနေ ဖတ်ပါ ဒါမှမဟုတ် အခမဲ့ ကူးယူပါ။ ယေဟောဝါသက်သေများ ထုတ်ဝေတဲ့ ကမ္ဘာသစ်ဘာသာပြန် သမ္မာကျမ်းစာ။
အိမ်အလှပြင်ပစ္စည်း | Asxox
Shop MM - Best online shopping website in Myanmar (Burma) offering the best deals & discounts on latest Mobiles, Tablets, Appliances, Fashions, and much more. Cash on delivery (COD) on all items in Yangon, Mandalay, Naypyidaw, and across Myanmar (Burma) - asxox.com
Bajaj RE မှ မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်အထိမ်းအမှတ် …
Mar 19, 2020·မန္တလေး၊ မတ် ၁၇ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခရီးသည်တင်သုံး ဘီးဆိုင်ကယ်များ ပထမဦးဆုံး တင်သွင်းဖြန့်ချိ ရောင်းချခဲ့သော Bajaj RE မှ မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော် ကာလအထိမ ...
April 2013 ~ ထားဝယ်သား
Apr 27, 2013·Data Storage ၁ ၉ ၅ ၆ လောက် က IBM ကုမ္ပဏီ က နေ RAMAC 305 ဆို တဲ့ ကွန်ပျူတာ ကြီး ကို ထွင် တယ်။ ဟာ့ ဒ် ဒ စ် သုံး တဲ့ ပထမ ဦး ဆုံး ကွန်ပျူတာ လို့ ပြော နိုင် တယ်။ အလေး ချိန် က တစ ...
mm_news | Pages of Htoo-Sann-Chin
ကျွန်တော် တို့ Sim Card တစ် သန်း စ ရောင်း ပါ့ မယ်။ ရန်ကုန်တိုင်း နဲ့ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသ ကြီး တွေ ကို ပထမ ဦးစားပေး အရ င် ဆုံး ရောင်းချ ပါ့ ...
Pages of Htoo-Sann-Chin | Sharing the reading collection
Pi Day Is Coming — But Tau Day Is Better. Posted by Soulskill on Monday March 12, @02:08PM from the circular-logic dept. PerlJedi writes"A few months ago,aTweet from Randal Schwartz pointed me toaYouTube video about ‘Triangle Parties‘ made by Vi Hart.My nerdiness and my love of math made it my new favorite thing on YouTube.
pre：صنع الصابون من حثالة الصابونnext：تعريف Soap Doctor